ပြည်ပ ခရီးသည် အလာနည်းတာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လား၊ နအဖကြောင့်လား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ပြည်ပ ခရီးသည် အလာနည်းတာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လား၊ နအဖကြောင့်လား။
ပြည်ပ ခရီးသည် အလာနည်းတာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လား၊ နအဖကြောင့်လား။
Posted by ကြယ်လေး on Jan 24, 2011 in Critic |2comments
ဗမာ့သွေး website မှကူးယူဖော်ပြသည်
မြန်မာနိူင်ငံကို ပြည်ပခရီးသည် ၀င်ရောက်မှု နည်းပါးနေတာဟာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လို့ လူအများက ထင်ထားကြပါတယ် ။ အမှန်တရားကို လူအများက အတ္တများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပြီး ကိုယ့်ဘက် ဆွဲတွေးနေရုံနဲ့တော့ အမှန်တရားက ပြောင်းလဲ သွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကိုပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ လက်ခံစေချင်ပါတယ် ။ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်မှာ အရမ်းကို ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ကချေသည်လေး တစ်ယောက် ကကြိုးကကွက် ဆင်လို့ အသက်ဝင်နေတဲ့ ပုံပမာ လှပနေရှာတဲ့ ဗမာ့နိူင်ငံမြေပုံလေးက မြင်သူတိုင်း နှစ်ခြိုက်စရာ ကောင်းသလို ရေမြေတောတောင် သယံဇာတတွေ ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ ဗမာနိူင်ငံရဲ့ မြေပေါ်ကို အလည်တစ်ခေါက် လာရောက် လည်ပတ်လိုသူတွေ အများကြီး ဆိုတာကတော့ သေချာလွန်းလှပါတယ် ။ အင်မတန်မှ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မင်းသမီး သုံးယောက်ပမာ အလှည့်ကျ ၀င်ရောက် ကူညီ ဖျော်ဖြေပေးနေတဲ့ နွေမိုးဆောင်း ကလည်း အခြားတိုင်းပြည်များနဲ့ ကွာခြားချက်က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလွန်းလှပါတယ် ။ ရွက်ဟောင်းတွေ ကြွေကြလို့ မိုးပေါက်လေးတွေ စတင်သက်ဆင်းလာတာနဲ့ အမေကို တွေ့လို့ ပြေးထွက်လာတဲ့ သားငယ်များပမာ အရွက်သစ်လေးတွေ ထိုးထွက်လာပုံက သက်ဝင်လုပ်ရှားလို့ မိုးရာသီရဲ့ အစများဟာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလွန်းလှပါတယ် ။
မိုးရေ ပက်ဖျန်းလို့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ စပါးပင်တွေ အချိန်လို့ ရင်မှည့်တဲ့အခါ ရွှေဝါရောင် စပါးခင်းများကြားမှာ လယ်သမားတို့ အလုပ်များတဲ့ အချိန် တော့ မိုးသားတွေကို ရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့ အခါ အလုပ်လုပ်နေသူတွေ အေးမြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပြည့်တဲ့ ပုံပမာ ဆောင်းကညာရဲ့ ၀င်ရောက်လာပုံက ညက်ညောလွန်းလှပါတယ် ။ အဲဒီလို အချိန်များမှာ အလုပ်ခွင်စောစောဝင်ကြတဲ့ လူအများက အေးမြမှုကို အန်တုဖို့ အတွက် မီးဖိုနားမှာ ၀ိုင်းစုကြပြီး ပူပူနွေးနွေး စားစရာလေးတွေကို လုပ်ကိုင်စားသောက်လေ့ ရှိတဲ့ အလေ့အထများဟာ တိုးတက်ခေတ်မှီတဲ့ နိူင်ငံများမှာ တကူးတက လုပ်ဆောင်ကြတာကို သွားတွေ့ရပြန်တယ် ။ ဆောင်းရာသီ ကုန်ဆုံးလို့ နွေဝင်စ အချိန်အခါ သာယာလှတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ သဘာဝ အလှဟာ ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီဆရာ တွေရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ပန်းချီးကားထက် အများကြီးသာတာပေါ့ဗျာ ။
နိူင်ငံတကာက ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေကို လာရောက် လည်ပတ်နိူင်အောင် အစိုးရက အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးရမှာက တရားမျှတမှု နှင့် လုံခြုံရေးပါဘဲ ။ 2007 ရွှေဝါရောင်မှာ ဂျပန်နိူင်ငံက သတင်းထောက်ကို လူတွေ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ် ပစ်သာပစ်ကွာ ဆိုပြီး တည့်တည့်ကြီး ဆော်ပစ်လိုက်တဲ့ အချက်က ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေ ရင်ထဲကို စိုးရိမ်စိတ်တွေ ၀င် လာစေတာ အမှန်ပါဘဲ ။ ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေဟာ သတ်ဖြတ်ခြင်း အလုပ်မှာ ယဉ်ပါးနေတဲ့ စစ်သားတွေ အတွက် သိပ်မဆန်းဘူး ထင်ရပေမယ့် မြန်မာနိူင်ငံကို လာရောက်လိုတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ နောက်တွန့်သွားစေခဲ့တယ် ဆိုတာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက လူတွေ သိထားစေချင်သလို လက်ခံထားစေချင်ပါတယ် ။
တိုင်းတပါးသား ကို အသာထား ကိုယ့်နိူင်ငံသား အချင်းချင်း တောင် လွတ်လပ်စွာ သွားလာနေထိုင်ခွင့်မရဘဲ အစစ်ဆေး အမေးမြန်းထူလွန်းတဲ့ အချက်များက အပန်းဖြေ အနားယူဖို့ လာရောက်ကြတဲ့ ခရီးသွားများ စိတ်ရှုပ်ဖွယ်ရာ ခံစားသွားရတာလည်း သတိထားပြီး ပြင်စေချင်ပါတယ် ။၀မ်းစာအရေးကို ခက်နေသေးတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများကလည်း ဂွင်မပါရင် ဘယ်အခါမှ အလုပ်မလုပ်ချင်တော့လို့ စီမံချက်ဟူ၍ တမျိုး ၊ ဥပဒေထုတ်၍ တဖုံ လုပ်စားနေတာကို ကြုံရတဲ့ ခရီးသွားက စိတ်ပျက်လို့ ညည်းညူသွားကြတာ အမှန်ပါဘဲ…..။
အချို့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေ ကြတော့လည်း အားနည်းချက်တွေကို ခဏမေ့ထားပြီး ရောက်ဖူးချင်ဇော အားကြီးလို့ လာရောက်ပြီး နောက်တခါ မြန်မာနိူင်ငံဆို လှည့်မကြည့်ချင် လောက်အောင် ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ မြန်မာနိူင်ငံသားတို့ရဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေကိုလည်း ထင်ရှားလွန်းလှပါပေတယ် ။ ။ သူများနိူင်ငံသားတွေက ဂျင်ပေါ်က ထုံး ဆိုရင် ဗမာနိူင်ငံသားတွေက ထုံးပေါ်က လေပွေလို့ ခေါ်ရလောက် အောင် လိမ်လည် လှည့်ဖျားခြင်း အတတ် မှာ ပါရဂူမြောက်နေတဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့လုပ်ရပ်လေးတွေကိုလည်း ကိုယ်ကျင့်တရားလေးနဲ့ ပြန်ထိန်းပေးစေချင်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက်က သဘာဝကို စနစ်ကျစွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိူင်ဖို့ လည်း အထူး လိုအပ်ပါတယ် ။ ခန္စာကိုယ်မှာ သွေးကုန်ခမ်းလို့ ခြောက်နွမ်းသွားသလို ဖြစ်သွားတဲ့ အင်းလေးကန်ကြီး က ညီးတွား နေရှာတဲ့ ပုံရိပ်တခုဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စနစ် ကို ညွှန်းဆိုပြနေတယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့အုံး ။ ကမ္ဘာမှာ ခြေနဲ့လှေလှော်ကြတဲ့ အလေ့အထ နဲ့ ရေပြင်အလယ်မှာ တည်ထားတဲ့ အင်းလေး ဖော်တော်ဦး စေတီတော်ကို ကို မြင်ဘူးချင်လို့ လာရောက် ရှုစားကြတဲ့ လူအများ တွေ့မြင်ရလိုက်တဲ့ ရေခန်းနေတဲ့ အင်းလေးအိုင်ရဲ့ အက်ကွဲနေတဲ့ မြေသားတွေက ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေကို နောက်တခါ မလာမိအောင် သတိထားဖို့ အသိပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ် ။
ပုံမှန်စီးဆင်းနေတဲ့ ရေစီးအားက အမှိုက်သရိုက်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို သယ်ဆောင်သွားနိူင်ပေမယ့် သူတို့ခွန်အားများကို ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ မြစ်ကြီးလေးသွယ်က သူတို့ကိုယ်တောင် အနိူင်နိူင်နဲ့ ချီတက်နေကြတာကြောင့် မြစ်ကြမ်းပြင် မြင့်တက်လာတာကို ထည့်မတွက်ခဲ့ကြတာ သိပ်ကို မှားသွားပါတယ် ။ ချောင်းတွေ့ရင် ဆည်ဆောက် ၊ မြစ်တွေ့ရင် တံတားဖောက် ဆိုတဲ့ စီမံချက်တွေက ထိုးနှက်ချက်က သူတို့သားသမီးတွေကို မောင်ပိုင်စီးခံရလို့ အရင်က ငြိမ့်ညောင်းခဲ့သလောက် အခုတော့ ဒေါသပြင်းပြသွားတဲ့ မြစ်ကြီးလေးသွယ်ရဲ့ ကြုံးဝါးသံတွေက အမုန်းလှိုင်းသံတွေ ဆူညံလာခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ကို ပိုးစိုးပက်စက် ခံနေရတဲ့ ပြည်သူလူထု ဘ၀ကလည်း တကယ့်ကို သနားစရာပါ ။
အင်မတန်မှ နုပျိုလှပတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးကို လောဘရမ္မက်အားကြီးသူတွေက သူတို့ အလိုဆန္ဒ ပြည့်ဝစေဖို့ အနိူင်ကျင့် ခံလိုက်ရနေတာကြောင့် ဘ၀ အလှ ညစ်နွမ်းသွား ရတဲ့ မြစ်ဆုံအလှ ကို မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတိုင်းက သူတို့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်အရောက်မှာ မြန်မာနိူင်ငံဆိုတာ လူသားတွေတင် အနိူင်ကျင့်ခံရတာ မဟုတ်ဘူး………သဘာဝ အလှကိုပါ ဖျက်စီးနေတဲ့ လူသားတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်ပါလို့ ပြောကြားလိုက်တဲ့ စကားသံတွေက အတင်းပြောတာ မဟုတ်ပေမယ့် နောက်ထပ်လာဖို့ စိတ်ကူးထားတဲ့ ခရီးသွားတွေ ခြေဦးမလှည့်ချင်အောင် ဖြစ်သွားတတ်ကြတာကို အသိပေးချင်တယ်ဗျာ..။
တချိန်တခါက ညို့မှောင် အုပ်ဆိုင်းနေတဲ့ မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ ရိုးမကြီးတွေ အလှဟာ ကိုယ်ကျိုးအတ္တ အတွက် လူအများက တရားဝင် တဖုံ ၊ မတရား နည်းလမ်းသဖွယ် စီးပွားရှာလိုက်တဲ့ ဒဏ်များ အပြင် ကိုယ့်နိူင်ငံက သယံဇတကို ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် အသုံးမချရဘဲ ထင်းမီးနဲ့ မီးသွေးကို အားကိုးနေရတဲ့ပြည်သူလူထုက လည်း အသုံးချခံရတော့ အင်မတန်မှ တကယ့်ကို နှမြောစရာ ကောင်းလွန်းပါတယ် ။
ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ကျက်သရေ ရှိလှတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ခေတ်မှီအောင် ဆံပင်တိုပေးလိုက်တာ အားမရလို့ အခု ဂတုံးလုပ်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာကို ရှက်လွန်းအားကြီးလို့ ရိုးမကြီးတွေ ငိုက်ရှိုက်နေရင်း အသိပေးတာက ဥတုရာသီ တောကိုမှီဆိုတဲ့စကားလေးကို သတိထားကြပါအုံးတဲ့ဗျာ… ။
နိူင်ငံတကာမှာ ရှေးဟောင်း ယှဉ်ကျေးမှုကို အမြတ်တနိူး တန်ဖိုးထားကြတာကို ကန့်လန့်တိုက်တာဘဲလား ၊ မသိလို့ဘဲ တမင်တကာ လုပ်တာလား မသေချာပေမယ့် သေချာတာတခုကတော့ အသက်အရွယ်အိုမင်းနေတဲ့ အဖွားအိုကို မိတ်ကပ်တွေ အတင်းချယ်ပြီး မော်ဒယ်ပမာ ပွဲထုတ်ချင်နေကြတဲ့ ညဏ်မပါနဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းရေး ပုံစံတွေ ကို စိတ်ပျက်နေရှာတဲ့ သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦးတွေ က ပြောလိုက်တဲ့ မင်းတို့ လက်ထက်ကြမှ လုပ်ရပ်လေခြင်း ဆိုတဲ့ စကားသံကို ဟစ်ကြွေးနေသယောင် ခံစားမိတယ်ဗျာ ။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေ အလာများတဲ့ နိူင်ငံတော်တော်များများကို သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အခန်းဂဏ္ဍကို မေ့ထားလို့ မရပေမယ့် ကျနော်တို့ နိူင်ငံက ဥာဏ်ကြီး ရှင်များက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် အစာကြေမယ် ၊ ရင်ချောင်စေအောင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်စရာ မလိုဘဲ အလိုက်တသိ မွမ်းမံပေးထားတာ နေသားကျနေတဲ့ ကျနော်တို့ အတွက် မသိသာလှပေမယ့် ခရီးသွားတွေ စိတ်ပျက်သွားစေတာ အမှန်ပါဘဲဗျာ ။ နိူင်ငံတကာ ခရီးသည်တွေကို အသာထား ကိုယ့်နိူင်သားတွေတောင် တိကျတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ဘယ်တော့မှ မတွေ့ဆုံရတဲ့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အခန်းဂဏ္ဍ က ပညာပြပုံလေးတွေ က မှတ်သားလောက်ပါပေတယ် ။
ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ အရာတွေဟာ အမှန်တွေလား အမှားတွေလား မြန်မာနိူင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ လူအများက အထူးကြိုးစားပြီး ဖြေကြားစရာ မလို မျက်တောင် တချက်ခတ်လိုက် တိုင်း အားနည်း ချက် တချက်ကို တွေ့ရလောက်အောင် အဘက်ဘက်က ပြိုကျပျက်စီးနေတဲက မြန်မာနိူင်ငံက ခရီးသွားတွေကို မစွဲဆောင်နိူင်လို့ ခရီးသည် အလာနည်းတာလား ၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ကြောင့် ခရီးသည် အလာနည်းတာလား စာဖတ်သူမှာ အသိဥာဏ် ရှိရင် စဉ်းစားကြည့် တာနဲ့ သိသာ ထင်ရှားနေပါတယ် ။ အခု ကျနော် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ချို့ယွင်းနေတဲ့ အချက်တွေကို ပြည်လည် ပြင်ဆင်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု တွေ ပြန်လုပ်ရင် အရင်က သဘာဝ အလှနဲ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ကို မလာပါနဲ့လို့ အတင်း ဆွဲထားရင်တောင် ဇွတ်အတင်းဝင်လာမယ့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေ များလာမှာ မြင်ယောင်မိပါတယ် လို့ လေးစားစွာ အကြံပြုတင်ပြချင်ါတယ် ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ဘက်က ချို့ယွင်းချက်ကို မပြင်ဘဲ ခရီးသည် အလာနည်းတာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ကြောင့်ပါလို့ မျက်လုံး စုံမှိတ်ပြီး အော်ရတာကို ကြည်နူးနေကြသူများနဲ့ သူများယောင်တိုင်း လိုက်ယောင်တတ်တဲ့ လူအများလည်း ဆက်လက်ပြီး များများ အော်မယ်လို့ စဉ်းစားရင် ငါ့မှာ လူသားတို့ရဲ့ အသိဥာဏ် ရှိရဲ့လားလို့ နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားကြည့် နိူင်ပါစေ.။
အရိုင်းဆန်တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အလှ က ဧည်သည်တွေ လာလည်ချင် လောက် အောင်
ဒါပေမဲ့ လဲ ခက်တာက အစစအရာရာ မှာ အဆင်မပြေမှုတွေ ကတော့ အများကြီးပါဘဲ။
ပြောမယ်။ ထောက်ပြမယ် ။ဆိုရင်တော့ ။မိုးလင်းသွားမယ်။
ဧည်သည်လဲ အခု့ချိန်မှာ ချက်ခြင်းကြီး …များများလာလို့လဲမဖြစ်သေးဘူးဆရာတို့ရေ။
( facility )တွေ က လဲ တကယ်တန်း မှာမပြည့်စုံသေးပါဘူး။
credit card တွေ နဲ့ ပေးလို့ သုံးလို့ မရတာတွေ လဲ ရှိတယ်။
transportation , communication , ဒါတွေ ကလဲ
တို့ အမိမြေမှာ ကြည့်စရာတွေ ကတော့ အများကြိးပါဘဲ။
ခက်နေတာက ဧည်သည် လျှောက် လည်နေရင်းက မတော် လို့ (မည်သူမဆို )
အပေါ့ အပါး သွားချင် ရင်တောင်မှ့ လမ်းဘေးအိမ်သာ ကောင်းကောင်းမရှိတာတွေ။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားတွေ အသွားအလာများတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိဖို့
ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ရှိတဲ့ နေရာတွေ ကျတော့လဲ ကိုယ့် မြန်မာတွေ တောင်
မသွားချင်လောက် အောင် ဘဲလေ။
အမှိုက်တွေ။ကြွတ်ကြွတ်အိပ်တွေ။ကွမ်းတံထွေးတွေကလဲ တို့ပြည်သားတွေ ရဲ့  စရိုက်ကိုဖေါ်ပြနေတာလေ။
မျက်နှာ သနပ်ခါး။ပေါင်မှာသေးကြောင်း ။ မဖြစ်ဖို့ လိုတယ်ဗျို့။
( အားလုံးကောင်းဖို့ အတွက် အားလုံးမှာ။လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
တာဝန်ယူတတ်တဲ့ စိတ်တွေ လူတိုင်းမှာ သာရှိနေမယ်ဆိုရင်။ )
အိမ်သာရင် ဧည့် လာပါတယ်။
မြန်မာပြည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာ culture tourism (ယဉ်ကျေးမှုကို
အခြေခံထားတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း) ဖြစ်ပါတယ်။
ဧည်သည်များများလာပြီး အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံလို (sex hunters, sex
clients, sex workers ) လွယ်လွယ်ရနိုင်တဲ့ /လွယ်လွယ်လာ ရှာမဲ့ ။
အပေါ်စား တန်ဖိုးမရှိတဲ့ ဧည့်သည်တွေ။
( child sex abuse tourism )လုပ်ချင်တဲ့ အင်တာပိုက black list ထုတ်ထားတဲ့ သူများတွေ။
ဗရုတ်သုတ်ခတွေ။ လာမှာတော့ အကြောက်ဆုံးပါဘဲ။
ပိုက်ဆံမရ ရင် နေပါစေ။
ထိုင်းနိုင်ငံလိုတော့ အဖြစ်မခံနိုင်လို့ ( culture tourism ) ကို မလွဲမသွေ ထိန်းသိမ်းရမှာပြည်သူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က ..တိုးရစ်တွေမလာဖို့ ကန့်ကွက်ထားတာ ဖယ်ပေးလိုက်လို့ .. လာကြတာ.. အဓိကအကြောင်းလို့ထင်ပါတယ်.။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုပ်ရှင် ထွက်လာပြီးရင် .. သိန်းနဲ့ချီထပ်တိုးဦးမယ်..။
ဒေါ်လာ .. သန်း၁၀၀လောက်ောတ့ တနှစ်အတွင်း..လူထုလက်ထဲ..စီးဝင်သွားမှာပဲ..
As Myanmar politics ease, tourism grows
The boatman turns off the engine and lets his long boat glide along Myanmar’s Inle Lake, as foreign tourists soak in the stunning scenery…
Ngae Ni, 35, graduated asachemist more thanadecade ago but he becameaboatman because he could not getabetter job in Southeast Asia’s only military-ruled nation and one of its poorest. He earns up to $250amonth ferrying foreigners around the lake.
“I hope that … more tourists will come here. They should really see the poverty in our country with their own eyes,” he said duringarecent trip, flashingasmile with his betel-nut-stained teeth.
Suu Kyi herself, in an interview shortly after her release, said large-group tourism wasn’t encouraged, but “individuals coming in to see, to study the situation in the country might beagood idea.”
Colorado-based Asia Transpacific Journeys, which specializes in custom journeys and small-group trips to Asia, said bookings to Myanmar have surged 150 percent since November compared toayear ago, as more travelers now feel more comfortable visiting the country.
Suu Kyi’s release isn’t likely to draw Americans in large numbers, partly because Asia isn’t high on their travel list and many consider the country dangerous after the military’s violent crackdown on in 2007, said Douglas Shachnow, head of the Florida chapter of the Pacific-Asia Travel Association.
“The release is just notabig issue,” he said. “There are other more long-standing factors that will … (limit tourism to) all but the most interested, inquisitive, open-minded travelers with the financial wherewithal.”
Arrivals to Myanmar surged 34 percent to 212,500 in the first nine months of last year and may hitarecord of 300,000 for all of 2010, according to the Bangkok-based Pacific-Asia Travel Association. Asians make up about two-thirds of the arrivals, Europeans 22 percent and Americans only 8 percent.
The total isafar cry from the 14 million who visit neighboring Thailand every year, the4million who go to nearby Vietnam, and the2million each to Cambodia and Laos.
Still, some of the country’s tour operators are hoping forabumper year with new hotels set to open this year. Myanmar also joined with Cambodia, Vietnam and Laos last year inacampaign to encourage tours combining their countries.
But Myanmar tourism is hampered byastring of issues including poor infrastructure, limited tourism facilities and difficulty in getting visas. Many areas, especially along the country’s border, are closed to tourists. The Internet is unreliable and credit cards are useless due to international sanctions, making itahard-cash country.
Despite the impediments, Myanmar appeals to travelers with its spectacular landscape and wide offerings from ancient Buddhist monuments to jungle trekking, bucolic villages and beach holidays.
One of its key attraction is Bagan, one of the world’s most remarkable archaeological sites where more than 2,000 ancient Buddhist temples and stupas dot the vast dusty plain. Others include Inle Lake, home to Ngae Ni’s Intha tribe, famed for their unique one-leg rowing technique and floating vegetable gardens.